Fikradaha la siinayo farshaxanka Kirismaska ​​| Abuurista khadka tooska ah
Judit Murcia | | Dhiirrigelinta
Kirismas kasta waxaan leenahay liiska dadka aan siineyno, waana taas musalafnimo de madaxa. Macaamilku wuxuu nagu dhiirrigelinayaa inaan iibsanno sanadka oo dhan iyo hadda, waxaan haynaa de dhammaan. Fikrad fiican ayaa ah sii fanka.
Hadiyad intee le'eg oo aanan hadda haysan? Sideen asal u noqon karaa Haddii aad raadineyso a hadiyad kala duwan, oo aad rabto inaad layaabto a hadiyad hal-abuur Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad fanka siiso. Sii tahay? Waxay u egtahay mid adag, laakiin waxaan kuu xaqiijineynaa inay jiraan fursado kala duwan oo loogu talagalay Kirismaskaan si kor loogu qaado dhaqanka iyo farshaxanka.
1 Hadiyadaha maskaxda hal abuurka leh
2 Soo hel warqadda 'PaperThrophy'
3 Qoraalada Aqua
4 Tigidhada bandhigyada farshaxanka
5 Farshaxanka Gaarka ah
6 Go'yaal farshaxan
Hadiyadaha maskaxda hal abuurka leh
Haddii hadiyadeena lagu soo hagaajiyo a Qofka halabuurka ah, Farshaxanka jecel, in xirfadiisu ka dhigeyso inuu si hal abuur leh ugu firfircoon yahay xayeysiis, naqshadeeye garaaf ah, sawir qaadis, ha quusan maxaa yeelay waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay la yaab. Waxaa jira runtii xulashooyin gaar ah oo hal abuur leh oo aad jeclaan doonto.
Waxaan hubnaa markaad aragto fikradaha aan kuu diyaarinay, inaad adiguna jeclaan doontid. Xusuusnow!
Waraaqaha Waa a sumadda Jarmalka u heellan sidii dib loogu abuuri lahaa madax xoolaha in la sudhay sidii koob, laakiin kiiskan lagu sameeyay papel. Kuwani waa farshaxanno xajmi ah oo xajmi ah, marka lagu daro ahaanshaha a sheegasho bulsheed, maaddadeedu waa gebi ahaanba deegaan ahaan maadaama ay caddeysay FSC eco-saaxiibtinimo. FSC waa urur caalami ah oo ilaaliya deegaanka isla markaana aqoonsi siiya shirkadaha run ahaantii u hoggaansama xuduudaha deegaanka.
Abuuraha sumaddan wuxuu u dhaqaaqay inuu raadsado naqshad habboon oo guriga lagu haysto iyo inuu awoodo inuu maalin walba arko oo uusan daalin. Waxaan sidoo kale doonayay inaan helo dheelitir iyo sameynta naqshad casri ah. Kiiskan, qaabab cubic minimalist waxay gaarayaan ujeedooyinkooda oo dhan. Waxay u taagan yihiin fududaan inta shucaaca xarrago ka muuqanayo.
ka naqshaduhu waa madax xayawaan, Koobab darbiga sudhan; iyo tirooyinka taagan. Waxaa loogu talagalay Berlin, Jarmalka iyo mashiinka la jaro oo horay loo duubay waraaqda bey'ada ku habboon tayo sare leh. Waa in la ogaadaa in waraaqo kasta la hubiyo mid mid, gacanta si loo hubiyo in kaliya moodooyinka si fiican loo jaray oo loo laalaabay. Markay tan dhaafaan control, in si rasmi ah u shaabadee waxaa qoray Papertrophy.
Ha u oggolaan in dhiirrigelintu kaa qabato iyadoo aanad ilaalin! Hadiyadani waa a faahfaahin aad u qosol badan oo aad siin karto dadka hal abuurka leh. Waa a xusuus qor aan biyuhu lahayn in aad awood u leedahay in aad wax ku qorto oo aan lagaa dhicin. Warqaddu ma dhalaasho marka biyaha lagu liqo. Khasaaraha kaliya ayaa ah inay u baahan yihiin adeegsiga qalin, qalin ama calaamadeeye joogto ah.
Tigidhada bandhigyada farshaxanka
Waxaan aad ugu baranay bixinta tikidhada si aan u aadno tiyaatarka ama bandhigyada noocyadooda kala duwan. Dhinaca kale, dad yar ayaa bixiya tikidhada bandhigyo farshaxan, matxafyo ama munaasabado naqshadeyn ah. Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad fiiriso magaaladaada ama hareerahaaga Waxaad la yaabi doontaa dhammaan dalabyada jira!
Haddii aad ku nooshahay magaalo weyn, way fududaan doontaa inaad hesho nashaadaadyada noocan ah. Waxaa jira meel aad u xiiso badan oo ku yaal Madrid, Barcelona iyo Seville. Waxay ku saabsan tahay CaixaForum. Waa shaqada bulshada ee La Caixa oo u heellan inay bixiso noocyo badan oo kala duwan bandhigyo, wadahadalo iyo waxqabadyada qoyska.
Waxa kale oo aad eegi kartaa waxyaabaha caadiga ah bogagga dhacdooyinka sida xiiqda, taas oo ay leedahay qayb farshaxan waxaana hubaal ah inaad ka heli doonto wax xiiso leh. Hadaadan ogayn hagaha waqtiga firaaqada, fiiri maxaa yeelay way leedahay soo jeedin magaalooyinka oo dhan Espana.
Farshaxanka Gaarka ah
Miyaad ka fikirtay inaad siiso sawirro? Xaqiiqdii waligaa waxaad rabtay inaad sameyso wax shaqsi ah waxaadna dhameysay daabacaadda sawir lagu qaabeeyey qaab sawir qurux badan Horay u sii soco, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad mid dalbato sawir caadadii. Sawirka waxaan ku arki karnaa sawir qaas ah @hey_yuddies.
Way badan yihiin qaabab kala duwan waana inaad heshaa midka ku habboon shakhsiyaddaada ama qofka aad siinaysid. Tusaale ahaan, waxaan dooran karnaa hal qaab oo dheeri ah macquul ah dhanka kale, caruureed. Waad awoodaa ku yaree raadintaada miisaaniyad inaad qorsheyneyso inaad maal gashato. Waxaad sameyn kartaa a caricature, taas oo u dhow mid majaajilo ah iyo qaab jilicsan, ama qaab ka badan macquul ah.
Hadaadan garanayn meesha aad ka bilaabaysid buscar, waxaan kuu dhaafi doonaa qaar ka mid ah astaamaha Instagram kuwaas oo u heellan inay qabtaan noocan ah amarro:
Leh a qaab macquul ah oo lagu daray naqshad fidsan, waa gabar yar, howlkar ah kuna faraxsan xirfadeeda. Haddii aad rabto inaad aragto shaqadiisa, ha ka waaban inaad booqato bogiisa Instagram waa: @hey_yudy
Qaab kale oo gebi ahaanba ka duwan kii hore ayaa ah kii @abdihakin_abdi
Haddii aad raadineyso qaab kuu dhow sawir, gabadhani waxay leedahay qaab noo soo xusuusin kara manga. Magaceedu waa Yolanda years oo waxaad ka heli kartaa Instagram sida @xDayaannax
Iyada oo la kaashanayo biyo-biyoodka iyo qalabka dijitaalka ah, @ lidiacantos.illustration ka dhigaysa go'yaal runtii fiican in la siiyo. Booqo astaanta Instagram-ka oo wax badan ka ogow iyada.
Ikhtiyaar kale oo aad u ansax ah ayaa ah hel sawir-qaade oo mid ka iibso filim sameeya. Waqtigan xaadirka ah, Internetka wuxuu noo ogolaanayaa inaan helno degello badan oo aan si toos ah uga iibsan karno sawirrada iyo daabacadaha farshaxankeenna, iyada oo aan dhex dhexaadiyayaal lahayn. Waxaa marba marka ka dambeysa ku soo badanaya in fanaan kastaa yeesho a dukaanka internetka, in kastoo ay jiraan ecommerce ka caawiya farshaxanada inay hel aragti.
OléartWaa a portal oo ay wadeen saddex qof: Sergio, Baptiste iyo Raquel. Kuwani waa xirfadlayaal suuqgeyn ah oo go'aansaday inay horumariyaan mashruuc farshaxan, mid ka mid ah hamigooda. Waxay taageeraan dhalinyarada Isbaanishka ganacsatada ah, hadda waxay leeyihiin wadar ah 15 fanaaniin kuwaas oo lashaqeeya.
Oh Là L'art, waa farshaxan farshaxan internetka ah. Waxaa abuuray laba ganacsade oo reer Barcelona ah oo jecel fanka. Waxay u heellan yihiin xulashada iyo dhiirrigelinta fannaaniinta soo baxaya. Barta Facebook-kooda waxaad kula socon kartaa wararkooda oo waxaad ku ogaan kartaa farshaxanno cusub.
Qaar ka mid ah hay'adaha hal abuurka leh waxay leeyihiin dukaan internet oo u gaar ah oo aad ka iibsan karto walxaha farshaxanka ee kala duwan. Hal kiis ayaa ah tan Haye istuudiyaha. Waa a barashada hal abuurka caalami ah oo caan ah oo kuyaal magaalada Barcelona. Waxay ku takhasuseen naqshadeynta garaafka iyo mashaariicda sawirka.
Qofkii fanka siiya dhaqan ayuu siinayaa. Waa qaybo leh qiime lagu daray oo soo gudbinaya shucuur badan, fikrado iyo sheekooyin. Maskaxda ku hay in aad ka heli karto farshaxan farsamooyin kala duwan, taas oo ah, isticmaalka ah pintura, ka sawir, ka silkscreen ama aragti, iyo kuwo kale.
Booqo a suuqa ama carwada wuxuu ina siinayaa fursad aan ku helno hadiyado kala duwan gacanta laga dhigay. Waxaa ka mid ah dalabkeeda dhoobada, dahabka, farshaxanka, qalabka xafiisyada, iyo waxyaabo kala duwan. Ku dukaamada yaryar waxay leeyihiin qiimo dheeraad ah iyo wixii ka sarreeya, waxaad ogaan doontaa tayada alaabtaada.
Midda keliya ka soo horjeedka maxaan ka heli karnaa, iyada oo aan la tixgelin in qiimaha uu xoogaa ka sarrayn karo, ayaa ah dhibaatada helitaanka alaabtan, taasi waa, way adag tahay in lala kulmo farsamayaqaannada waxayna nagu qasbeysaa inaan si shaqsi ah u aadno si aan ugu soo iibsanno carwooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Fikradaha in la siiyo farshaxanka Kirismaska